अस्पतालले दियो यस्तो जानकारी ! पूर्वराजा र प्रेरणाको स्वास्थ्यमा सुधार, पूर्वरानी र नेता खनालको यस्तो अवस्था -
अस्पतालले दियो यस्तो जानकारी ! पूर्वराजा र प्रेरणाको स्वास्थ्यमा सुधार, पूर्वरानी र नेता खनालको यस्तो अवस्था
काठमाडौ । कोरोना पुष्टि पछि उपचाररत पूर्वरानी कोमलको अझै आइसीयुमै राखेर उपचार जारी छ । त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको पनि अक्सिजनमै राखेर उपचार जारी छ । उनको स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वास्थ्य स्थितर रहे पनि पूर्वरानी कोमल भने आईसीयूमै रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
कोरोना पुष्टि पछि पूर्वराजा रानी र उनीहरुकी छोरी प्रेरणा शाहको पनि नर्भिक अस्पतालमा उपचार जारी छ । एमाले नेता खनालको पनि नर्भिक अस्पतालमै उपचार गरिएको छ । पूर्वराजा र प्रेरणाको स्वास्थ्यमा सुधार आएको भएपनि पूर्वरानीको भने आईसीयूमा उपचार जारी छ । अस्पतालले पूर्वरानी कोमलको स्वास्थ्य अवस्थामा पनि लगातार सुधार भइरहेको जनाएको छ ।
कोमललाई शाहलाई गत बिहीबारदेखि प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार थालिएको थियो। राजदम्पती कोरोना भएपछि छोरी प्रेरणासहित ११ दिनअघि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन्। नर्भिक अस्पतालमै उपचाररत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहको अवस्था भने सामान्य र स्थिर छ।
Previous श,व पोष्टमार्टमको लागि हिडेको बैतडीमा जिप दुर्घ!टना,५ जनाको मृ,त्यु
Next उपत्यकाको निषेधाज्ञा लम्ब्याउने सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय